Mustafe Iyo Hal Sano: Muxuu Kaga Duwan Yahay Muuqaalladii Indho-sarcaadka Ahaa Ee Tobanka Sannadood Socday - Jigjiga Online
HomeSomalidaMustafe Iyo Hal Sano: Muxuu Kaga Duwan Yahay Muuqaalladii Indho-sarcaadka Ahaa Ee Tobanka Sannadood Socday
Mustafe Iyo Hal Sano: Muxuu Kaga Duwan Yahay Muuqaalladii Indho-sarcaadka Ahaa Ee Tobanka Sannadood Socday
Jigjiga (JigjigaOnline) – Toddobaadkan waxa soo baxay filim documentary ah oo si kooban usoo bandhigaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay xukuumadda sannad jirsatay ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar.
Muuqaalkan oo ka kooban 21 daqiiqadood, waxa uu dul istaagayaa qaybo ka mid ah waxqabadkii dawladda ee muddadii sannadka ahayd iyo duruufihii adkaa ee ay xukuumaddu waajahday bilowgii xukun-xileedka.
Marka si guud loo eego, waa dulka-xaadis yar oo kooban oo si kooban u tilmaamaya qaybo ka mid ah wax-qabadkii sannadka tegay, taas oo macnaheedu yahay in waxyaabihii u qabsoomay sannadkii ay xukuumaddu jirtay uu aad uga badan yahay inta lagu tilmaamay muuqaalkaas.
Qaybta koowaad, waxa ay dul istaagaysaa qaabkii ay xukuumaddu ku timid iyo dhibaatooyinkii taagnaa iyo waliba sidii ay wax walba u burbursanaayeen, iyadoo seeska hoose laga soo bilaabay dhismeyaasha hay’adaha kala duwan ee hoggaamintii hore sida khaldan u isticmaashay, qaarkoodna u baabi’isay si aanu deegaanku madaxa ula kicin.
Qaybaha xigaana waxay tilmaamaysaa tallaabadii weynayd ee dib usoo celinta astaamihii Diinta iyo Soomaalinimada oo ahaa udub-dhexaadka qorsheyaashii xukuumadda ee bilowgii xafiiska. Waxa ku lammaan tababarradii ciidamada gaarka ah, hirgelinta xorriyatul-qawlka, albaabaddii loo laabay Jeel Ogaadeen, taakulaynta barakacayaasha, isbeddelkii lagu sameeyey warbaahinta SRTV iyo qodobbo kale.
Muxuu kaga duwan yahay indho-sarcaadkii iyo biyihii SRTV laga cabbi jiray tobanka sannadood?
Shacabka Dawladda Deegaanka Soomaalida, waxay kalsoonidu ka dhimatay toban sannadood ka hor, markaas oo ay u bilaabantay been cad oo ay ku qasbanaayeen inay u qaataan sidii ay run tahay. Midkooda indhaha kala fura ee beenta loo sheegayo dareen taban ka bixiya, waxa uu waajahayey ciqaab iyo jeel aanu kasoo waaqsanayn, taasina waa sababta ay telefishanka deegaanka ugala socon jireen biyo dhulka iyo cirkaba ka imanayey oo loo sheegayey inuu u keenay Cabdi Iley, laakiin ku koobnaa indho-sarcaad iyo waxba kama jiraan, iyadoo marka ay xoolo-dhaqatada iyo reer guuraagu isku dayaan inay u biyo doontaan halkii ay TV-ga ka daawanayeen ay ugu tegi jireen gelgelin iyo ceelal gudhan, wixii loo sheegayeyna ahaayeen been uu Madaxweynahoodu si badheedh ah ula soo hor istaagayey, iyaguna si naftooda ay u badbaadsadaan ay qasab sacabka ugu tumi jireen.
Waxa kale oo ay tobankaa sannadood daawanayeen waddooyin waaweyn oo Photoshop lagu sameeyey, oo looga dhigayey in dhulkooda ay ka dhisan yihiin, iyadoo xaqiiqaduna ahayd in deegaanku u kala go’naa waddo xumo.
Haddaba muuqaalkan Mustafe iyo Hal Sano ayaa waxa uu gebi ahaanba ka duwan yahay musalsalkaa tobanka sannadood socday, waxaana uu si dhab ah u taabanayaa xaqiiqooyinka uu qof walba ogyahay ee ku qotoma mashaariic la fuliyey, waddooyin dhismay iyo kuwo la dhagax-dhigay, laakiin waxa uu dhinaca kale ka tegay waxyaabo badan oo sannadkaas qabsoomay oo u baahnaa in la dul-istaago.
Dhibaatada Qabyaaladda: Qabiil Darteed Ma Laguu Colaadiyey?